Taliska Ciidanka Dawladda ee Magaalada Kismaayo oo ka War Bixiyay xaaladda ammaan ee magaaladaasi – idalenews.com
Taliska Ciidanka Dawladda ee Magaalada Kismaayo oo ka War Bixiyay xaaladda ammaan ee magaaladaasi
Gen Ismaaciil Saxardiid Taliyaha Ciidamada dawladda ee Gobolada Jubbooyinka ayaa ka war bixiyay xaaladda ammaan ee Magaalada kismaayo ee Gobolka Jubada Hoose.
Gen. Saxardiid ayaa ka shanqariyay in xaalad ammaan oo aad u wanaagsan ay ka jirto magaalada kismaayo xiligana ay tahay mid si weyn loogu ladi karo nabadgelyada iyo Xasiloonida ka jirta Kismaayo.
Taliyaha ayaa ku amaanay Ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa amisom in ay xaqiijiyeen isla markaana ay sugeen ammaanka magaalada Kismaayo oo uu sheegay in xiligan aysan ka jirin wax cabsi ah.
Taliyaha ayaa soo hadal qaaday in mararka qaar ay dhici karaan dilal iyo wax la mid ah taasina ay ka dhacdo meel walba oo caalamka ah hase yeeshee magaalada iyo nawaaxigeeda ay haatan ka bad qabto dagaalo qaraxyo iyo wax la mid ah.
Gen Saxardiid oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa raaciyay in ammaanka ka jira Magaalada Kismaayo ay ku baahin doonaan magaalooyinka ee Gobolada Jubbooyinka isla markaana ay ka sifeyn doonaan kooxaha ka tirsan Xarakada Shabaab oo meelaha qaarkood ku sugan.
Taliyaha Ciidamada Milateriga dawladda Federaalka Soomaaliya Gen. Ismaaciil saxar diid ayaa ugu yeeray Shacabka ku dhaqan Gobolkaas in ay la shaqeeyaan Ciidamada dawladda.
Magaalada Kismaayo ayaa waxa ay ka mid ahayd meelihii laga saaray xarakada Shabaab kuwaas oo afartii sano ee la soo dhaafay gacanta ku hayay maamulka Magaaladaas.
Midoowga Arday Jaamacadeed ee Kismaayo oo la abaabulayo
Marekanka oo sheegay in uu Kordhinayo Saldhigyada Qarsoodiga ah Ee qarada Africa